Vaovao - Fitsidihan'ny mpanjifa kongoley ny milina famenoana
Nandritra ny The China International Import Expo faha-2 tamin'ny novambra, tonga tany Shanghai ny delegasiona afrikanina 2019 avy any Kongo, Afrika Atsimo. Nitsidika sy nizaha ny masinina notakian'izy ireo ny tompony, ny orinasanay no mpamatsy milina famenoana fanalahidy amin'ny fandaharam-potoanany.
Izahay, Higee Masinina, mpamatsy famokarana mpamokatra, manana traikefa efa ho 20 taona eo amin'ny sehatry ny famenoana, fametahana, fanoratana ary fametahana milina ho an'ny karazana vokatra isan-karazany. Izahay dia matihanina mpamatsy vahaolana iray hafa famenoana vahaolana. Nandritra ny dia nataon'izy ireo, ny mpanjifanay dia nanadihady ny rafitry ny fitsaboana mialoha ny rano, ao anatin'izany ny sivana fasika quartz, sivana carbon-aktif, rafitra RO, sterilizer Ozone, tankina rano. Ary izy ireo koa dia nanandrana ny fihazakazaky ny boriborintany cola monoblock 3 in 1, famenoana ary famonoana milina fanamoriana. Farany izahay dia manana fivoriana momba ny varotra aorian'ny fivarotana, ny andro fandefasana, ny fe-potoana fandoavam-bola ary ny tsena momba ny fivarotana tsipika famokarana rano tavoahangy any Afrika.
Misy sombim-baovao avy amin'ny delegasiona afrikanina ao Kongo fa ny governemanta dia mandrara ny mpamokatra eny amin'ny tsena eo an-toerana tsy hamokatra rano sachet.
Ny milina famenoana rano sy sachet dia famokarana mafana any amin'ny faritra hafa atsy Afrika izao. Saingy mila mieritreritra ny hametraka tsipika famokarana rano vaovao amin'ny ho avy izy ireo.
Nahita ilay milina sahaza azy ny delegasiona afrikanina, nankafy ny sakafo sinoa, nijery ny fitsapana ny masinina. Izy ireo dia manome dera lehibe ho an'ny fikirakirana tsara sy ny traikefa mitantana 5S mandritra ny fitsidihan'izy ireo ny atrikasa, efitrano fivoriana, departemantan'ny famokarana, trano fanatobiana entana ary tranokala fitantanana. Izahay koa dia mirehareha amin'ny kalitaon'ny famokarana ary mankamamy ny fiaraha-miasa. Masinina Higee, ny safidinao tsara ho an'ny zava-pisotro rehetra, zava-pisotro sy famenoana rano famonoana, fametahana labozia ary fonosana. Tongasoa eto hitsidika anay! Eto foana izahay miandry anao!
Fotoana fandefasana: Dec-18-2019